GRUB 2.06 yanonoka asi iine gadziriso yeBootHole | Linux Vakapindwa muropa
GRUB 2.06 igore rakanonoka, asi riine gadziriso yeBootHole
Ini, uyo akatanga kushandisa Linux muna 2006, ndichine pfungwa ye "njodzi" pese pandinoverenga izwi iri. Hazvina kunyanya kushata, asi kana iwe uine matambudziko nazvo uye iwe usingazive kuzvigadzirisa, iyo bootloader inokundikana zvinogona kududzirwa mukudzosera uye kurasikirwa neruzivo. Uye zvakare, murudzi urwu rwe mamaneja panogona kuve nekushomeka uye madhiragi seaya awaruramisa GRUB-2.06, iyo nyowani vhezheni yakasvika gore rakanonoka uye angangoita maviri mushure mev2.04.
Iyo GRUB 2.06 kuburitswa yakarongerwa 2020, asi haina kuuya. Izvo zvikonzero chaizvo hazvina kuburitswa pachena, asi isu tatoziva kuti 2020 raive risiri iro rakajairika gore pasirese. Zvakare, munguva pfupi yapfuura vakawanikwa Tsikidzi dzaifanirwa kugadziriswa, saka, sezvakagara zvichitaurwa, hazvina kunonoka kana mufaro wacho wakanaka uye kana kunonoka kuri kwechikonzero chakanaka. Inowanikwa kuyedza kubva munaKurume, ikozvino yakatangwa su shanduro yakagadzikana.
GRUB 2.06 Zvakakosha
Matinji akati wandei akaverengerwa kuti iwedzere kuenderana. Kusvika parizvino, migove mizhinji yakabata zvinhu nenzira yavo. Mushure mekushanda pamwechete, izvi zvachinja.
Iye zvino inotsigira LUKS2 encryption vhoriyamu.
BootHole / BootHole2 kuchengetedza kugadzirisa.
Tsigiro yeGCC 10+ uye Clang 10+ mune izvo zvisiri vhezheni yeshanduro dzichangoburwa, kubvira kare GCC 11 y kurira 12 Vakatoburitsa vhezheni dzavo dzakagadzikana.
Bhootloaders anonyanya kuomarara zvikamu, saka hazvikurudzirwe (kunyangwe uchigona) gadza kana kuzvishandura iwe pachako. Uye zvakare, akasiyana Linux kugoverwa anowedzera iwo mapakeji nyowani sekuvandudzwa nekukasira pavanogona, saka, ndinofunga, hazvina kukodzera kutora chero njodzi, kunyanya kune vashandisi vekugovera vane yavo yekuvandudza modhi iri Rolling Kuburitswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GRUB 2.06 igore rakanonoka, asi riine gadziriso yeBootHole
Kugadziridza / imba muzvikamu zvakasiyana, kana kana uine akati wandei GNU / linux, iyo data reMagwaro Mifananidzo, Zotero Dhawunirodhi nezvimwe mune chimwe chikamu, uchichinja iwo e / imba mune yega OS kune avo vanobatana kuti vagare vaine ruoko «rwewe» iwe Izvo zvinodzivirira kuti mune zvinoitika zvezvinetso neGRUB pane mukana wekurasikirwa kwedata nekuda kwekuisazve, pane kumwe kumisikidza kana runyorwa rwezvirongwa zvinogona kutsigirwa otomatiki kana zvichikosha kwazvo.